Barcelona Oo Ku Dhawaaqday Safka Ay Kaga Hortegeyso Kooxda Elche.
Home Horyaalka Spain Barcelona oo ku dhawaaqday Safka ay kaga hortegeyso kooxda Elche.
Barcelona ayaa ku dhawaaqday Safka ay kaga hortegeyso kooxda Elche kulan ka tirsan horyaalka spian oo hore u baaqaday iyadoona dhamaan soo xulatay ciyaartoyda ugu saameynta badan kooxda.
Kulankaan ayaa ka dhici doono gobolka Catalonia gaar ahaan magaalada barcelona ee garoonka caanka ah ee Camp Nou ayaana caawa Sedax Saac Laga baasan doonaa barcelona hadii ay caawa guul hesho ayaa ka dhigi doonto ineey imaan doonaan booska sedaxaad.
Athletcio madrid ayaa Sanadkaan heysa hogaanka horyaalka waxaana ay 3 dhibcood ka sareeyaan Real madrid oo kusoo xigta waloow kooxda Simeone kulan baaqi ah gacanta ku heysato.
Safka barcelona waxaa hogaamin doono kabtooda Messi barcelona ayaana dooneysa ineey kusoo laabato wadada guulaha kadib barbarihii ay la galeen kooxda Cediz isbuucaan.
Previous articleRoanld Keoman oo sheegay in kooxdiisa u dagaalameyso ku guuleysiga horyaalka sanadkan.
Next articleMiyuu diyaar yahay thomas Partey kulanka habeen dambe Arteta ayaa ka hadlay.